नाकाबन्दी भारतको सबैभन्दा ठूलो कूटनीतिक असफलता : महेन्द्र पी लामा – Our Nepal News
भारत नेपाल बीचमा कसलाई अर्कोको बढी आवश्यकता छ ?
सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन लागि नेपाल र भारतका प्रबुद्ध समूहले काम गरिरहेको छ । लगातार बैठकहरू पनि भएका छन् तर, के के सहमति हुँदैछ भन्ने आएको छैन । प्रबुद्ध समूहका सदस्य महेन्द्र पी लामाले सन्धिमा नेपालले के के संशोधन चाहेको छ भन्ने खुलेर कुरा गरेका छन् । लामासँग नेशनल हेराल्डले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
मलाइ लाग्छ, अन्य कुनै पनि सार्वभौम देशहरूले नेपाल र भारतले जसरी कुराकानी गर्दैनन् । त्यहाँ खल्ला सीमा छ, सामान, सेवा, प्रविधि, मानिसहरूको निरन्तर आवतजावत हुन्छ । भारत र नेपालबीच करिब ७० वर्षदेखि चलिआएको यस्तो खालको आर्थिक व्यवस्था बनाउन युरोपियन युनियनलाई ४०/५० वर्षको समय लाग्यो ।
अर्को तिर, भारतको आकार, जनसङ्ख्या र भौगोलिक अवस्थितिको कारणले केही निश्चित क्षेत्रहरू छन्, जहाँ नेपालले भारतको सहयोग बिना केही गर्न सक्दैन । उदाहरणका लागि, नेपाललाई समुन्द्रसम्मको पहुँचको सुनिश्चित गर्नका लागि भारतको सहयोग आवश्यक पर्छ ।
नेपाललाई आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री, औषधि र अन्य अत्यावश्यक सर-सामानहरू भारतबाट निर्यात हुन्छ । धेरै नेपाली विद्यार्थीहरू भारतीय शैक्षिक संस्थाहरूमा पढ्छन् र उपचारको लागि पनि धेरै नेपालीहरू भारत आउँछन् ।
तर, केही वर्षयता नेपालीहरू पश्चिमा देशहरूमा पनि जान थालेका छन् । नेपालको युवापुस्ता भारतभन्दा पनि अन्य देशहरूमा बढी गएका छन् । यस्तो ‘एक्सपोजर’को कारणले नेपालीहरू विशेषगरी सार्वभौमिकता र भारतसँगको सम्बन्धको बारेमा धेरै नै संवेदनशील भएका छन् ।
सन् १९५० को शान्ति र मैत्री सम्बन्धको बारेमा नेपालको मुख्य चासो के के हुन् ?
उक्त सन्धि नेपालमा राणाहरूको निरङ्कुश शासन भएको बेलामा गरिएको थियो । सन्धिमा हस्ताक्षर हुनासाथ नेपालमा राणा शासन ढलेको थियो । त्यस बेलाको सन्दर्भ र अहिलेको सन्दर्भमा धेरै फरक छ ।
दोस्रो, उक्त सन्धिमा भएका केही प्रावधानहरू समयसँगै पुरानो भएका छन्, जस्तै धारा २ र धारा ३ । धारा २ मा यदि कुनै छिमेकी देशसँग कुनै गम्भीर समस्या उत्पन्न भयो र त्यसले दुई देशबीचके मैत्री सम्बन्धमा असर पुग्ने अवस्था आयो भने एक अर्कालाई त्यसको जानकारी दिनु कर्तव्य भएको उल्लेख गरिएको छ ।
तेस्रो, सन्धिमा त्यस्ता विभिन्न बुँदाहरू छन्, जसलाई नेपालले सच्याउन वा खारेज गर्न चाहेको छ । अन्य देशहरूले पनि सन्धिबारे पटक पटक असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
नेपालीहरूले सधैं सन्धि पुनरावलोकन गर्न चाहेको बताउने गरेका छन् । तर, नेपालको कुनै पनि सरकारले कसरी पुनरावलोकन गर्ने भनेर ठोस प्रस्ताव ल्याउन सकेको थिएन । उनीहरू आफैंलाई पनि के कुरामा पुनरावलोकन चाहिएको भन्नेमा कुरा थाहा थिएन ।